ခေါင်းခဏခဏလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးတတ်လား - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆံပင်ဆိုတာ မျက်နှာအလှအပကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သလို ဖုန်တွေ အမှုန်အမွှားတွေ လာကပ်ဖို့ လေထဲမှာတလွင့်လွင့်နဲ့ အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ သက်ရှိဖုန်စုပ်စက်လေးလို့ ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ တချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ တစ်ပါတ်မှာ ဘယ်နှကြိမ် ဘယ်နေ့ဆိုရင်တော့ ခေါင်းလျှော်မယ်ဆိုတာမျိုး အမြဲ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်လေ့ရှိပေမဲ့ တချို့ကျ လျှော်ချင်စိတ်ပေါ်မှ အနံ့အသက်မကောင်းတော့မှ လျှော်တတ်ပါတယ်။
တချို့ကတော့ နေ့တိုင်းနီးပါးကို ရေချိုးတိုင်း ခေါင်းလျှော်တဲ့အကျင့်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ယောကျ်ားလေးတွေနဲ့ ဆံပင်သိပ်မရှည်သူတွေပေါ့။ ဆံပင်သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်နေရင်း တပြိုင်တည်းမှာ မမေ့သင့်တဲ့ အချက်ကတော့ ဒီဆံသားတွေဟာ သံမဏိနန်းကြိုးမျှင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ လျှော်လွန်းရင်လည်း ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
🔼ဘာကြောင့် ခေါင်းမကြာခဏလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးတာလဲ ??
ခေါင်းလျှော်ရည်တွေရဲ့ အဓိက အလုပ်ကတော့ ချွေး၊ အဆီ၊ အညစ်အကြေးနဲ့ ဖုန်တွေကို စုစည်းပြီး ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆီလို့ဆိုရာမှာ လိမ်းထားတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီ၊ အုန်းဆီ၊သံလွင်ဆီ နဲ့ haircoat တွေတင်မကဘဲ ဆံသားကြံ့ခိုင်မှု၊ ပျော့ပျောင်းမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သဘာဝအဆီတွေကိုပါ ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အဆီလွှာ ပျက်စီးမှုကြောင့် ဆံသားတွေ ခြောက်သွေ့ကြမ်းရှလာပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းသိပ်မလျှော်သူတွေမှာတော့ ဆံသားအရည်အသွေးပိုကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။
🔼ဒါဆို ခေါင်းမလျှော်တော့ဘူးဆိုရင်ရော ??
အဲ့လိုလည်း အစွန်းရောက်လို့ မရပါဘူး။ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နံနံစော်စော်နဲ့ ပျော့ပျောင်းတောက်ပ အရည်အသွေးကောင်းနေလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ ဦးရေပြားမှာ ယားယံတာ၊ အဖတ်လေးတွေကွာလာတာ ၊ ယားနာပိုးဝင်တာ၊ အနာဖြစ်တာ စတဲ့ ပိုဆိုးတဲ့ ပြဿနာတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်အရမ်းတို အရမ်းပါးသူတွေကလွဲရင် ဆံသားထူထဲရှည်လျားသူတွေအတွက် ပုံမှန်တစ်ပါတ် တစ်ကြိမ်၊ အနည်းဆုံး ဆယ်ရက်တစ်ကြိမ်နဲ့ အများဆုံး တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်လောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ်။ မိမိဆံသားထုထည်ပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကြောင့် ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ ပျော့ဆေးမဖြစ်မနေသုံးပေးဖို့နဲ့ ဆံပင်လုံးဝမခြောက်သွေ့ခင်မှာ hair coat သို့မဟုတ် ဆီတစ်ခုခုလိမ်းပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုလည်း သိပ်မပြင်းတဲ့ အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သုံးစွဲဖို့ လိုပါသေးတယ်။